Degso Hello Neighbor 2 loogu talagalay Windows
Degso Hello Neighbor 2,
Hello Deriska 2 wuxuu ku jiraa Steam! Hello Deriska 2 Alpha 1, mid ka mid ah cayayaanka ugu xun ee naxdinta leh ee kombuyuutarka, ayaa hadda loo heli karaa soo dejin bilaash ah. Hello Deriska 2 Alpha 1 waxaa loo heli karaa soo degsiin bilaash ah kahor intaan la sii deyn Hello Deriska 2. Hello Deriska, mid ka mid ah cayayaanka ugu xun ee naxdinta leh ee kombuyuutarka iyo mobilada, waa taxane.
Isku dayga inaad raadiso Mr. Peterson, oo la waayey dhacdooyinkii ciyaartii ugu horreysay ka dib, waxaa ku soo raacaya noole dahsoon. Hello Deriska 2 wuxuu ku jiraa Steam!
Soodejiso Deriska Hello 2
Hello Deriska 2 waa ciyaar naxdin leh oo qarsoodi ah oo lagaa ceyrsanayo xayawaan isku dayaya inuu helo deriskaaga qarsoodiga ah.
Waxaad la ciyaareysaa AI, aqoon is-barasho sare leh oo raacda oo la jaanqaadaysa dhaq dhaqaaq kasta oo aad sameyso Is-barashada AI: Sirdoonka farshaxanka wuxuu sahamiyaa deegaanka wuxuuna had iyo jeer raadiyaa habab uu kugu gaadho Sirdoonka macmalka ah ayaa ku daba jooga. Sirdoonka macmalka ah wuxuu leeyahay waxqabad joogto ah; Aadida duurka si aan u seexdo, wax u cuno, u kariyo, laga yaabee in aan hoos u dhigno bacaha jirka. Sirdoonka macmalka ah wuxuu u adeegsadaa walxaha sida aad adigu u sameyso Tusaale ahaan; Sirdoonka Artifishalku wuxuu sameeyaa isla marka aad isticmaasho dab bakhtiiye si uu kor ugu kaco Dunida Furan: Baadh Raven Brooks, ma jiraan wax xaddidaad ah oo meel walba waad ka aadi kartaa bilawga ciyaarta.
Sirdoonka macmalka ah ayaa ilaaliya guriga markaad iskudayeyso inaad gasho,waxay la socotaa meel kasta oo aad tagtid. Waxaad leedahay sheeko kuu gaar ah. Sheekada waxaa qaabeeyay sida aad u ciyaarto.
Adduunku wuu isbeddelaa iyadoo loo eegayo ficilladaada Khibrad Sandbox: Waxaad u baahan tahay inaad raadiso xalal hal abuur leh si aad u xalliso xujada adigoo isku daraya waxyaabo kala duwan, astaamaha deegaanka iyo xirfadaha madal. Inta badan dhacdooyinka ciyaarta waxaa loo qorsheeyay si joogto ah oo aan kala sooc lahayn; tani waxay siinaysaa dareen adduun oo nool. Waxaad kuheli kartaa natiijooyin kaladuwan adigoo baaraya dhacdooyinka ciyaarta.Waxaad kuheli kartaa natiijooyin kaladuwan adigoo baaraya dhacdooyinka ciyaarta.Waxaad kuheli kartaa natiijooyin kaladuwan adigoo baaraya dhacdooyinka ciyaarta.
Hello Deriska 2 Shuruudaha Nidaamka
Qalabka kombiyuutarkaaga ay tahay inuu ku ciyaaro Hello Deriska 2 waxaa lagu qeexay shuruudaha nidaamka Hello Neighbor 2 PC; Shuruudaha nidaamka ugu yar
Nidaamka Howlgalka: Windows 10 64-bit
Processor: Intel i5 ama ka fiican
Xusuusta: 6 GB RAM
Sawirada: Nvidia GTX 770 iyo wixii ka sareeya
Kaydinta: 4 GB oo bannaan
Xusuusta: 8 GB RAM
Sawirro: Nvidia GTX 1060
Hello Neighbor 2 Noocyada
Wararkii Ugu Dambeeyay: 09-04-2021